ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖုန်း၏အခြေခံ application များ Androidsis
သင် Android ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးဝယ်သောအခါယခုမှာဖြစ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ ဖုန်းကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအတိုင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲပါ၊ လှည့်ကွက်အသစ်များကိုရှာဖွေပါ။ သင်၏ဖုန်းမှအကျိုးအပြည့်အဝရယူနိုင်မည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုလည်းထည့်သွင်းပါ။ ဤအချိန်ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များအမြဲရှိသည်။
အန်းဒရွိုက်သုံးစွဲသူအများစုမှာသူတို့၏ဖုန်းတွင်ရှိထားသည့် application များနှင့်သင်သိရန်ကောင်းသည်။ ၎င်းကိုသင်၏စက်ကိရိယာပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်အလွန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်မင်းကဖုန်းရဲ့အားသာချက်တွေကိုအချိန်မရွေးယူသွားမှာပါ။ အကယ်၍ သင်ရှာဖွေနေသည်မှာ၎င်းကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည် ဤဆောင်ပါး ၎င်းသည်သင့်အတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်သည်။
4 Tools များ
6 လုံခြုံရေးနှင့် privacy
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖုန်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည့်အရာများထဲမှတစ်ခုမှာသူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရလျှင်သင်သေချာပေါက်သိထားသောလျှောက်လွှာများကိုတွေ့ရသည်။ messaging application များရွေးချယ်ခြင်းသည်အတော်လေးကျယ်ပြန့်သည်အချို့သောအရာများသည်အထက်ဖော်ပြပါအချက်များဖြစ်သော်လည်း WhatsApp, Telegram နှင့် Facebook Messenger သည်ယနေ့အချိန်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ သင်လုပ်နိုင်ပေမယ့် ဒီ link ထဲမှာအများကြီးပိုပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိ.
messaging application များအပြင် Android မှာလူမှုကွန်ယက်တွေကိုလည်းတွေ့တယ်။ operating system အသုံးပြုသူများအကြားလူကြိုက်များသောနှစ်သက်မှုနှင့်၎င်းတို့အများစုမှာပုံမှန်အသုံးပြုကြသည့်နောက်ထပ် application အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ တဖန်ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ သုံး app ကိုရှာပါ။
သင်၏ Android ဖုန်းဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည့်အရာသည်ဂီတကိုနားထောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ အသုံးပွုသညျ့နညျးလမျးမှာ streaming ဂီတကိုနားထောငျခွငျးဖွစျသညျ၊ ငါတို့မှာအများကြီးရှိတယ် ဂီတဖွင့်စက်များ ဒီတာဝန်လွယ်ကူချောမွေ့သောယနေ့ရရှိနိုင်ပါ။ သငျသညျ streaming များပေါ်တွင်လောင်းလျှင်, Spotify သည်ဤကိစ်စတှငျအဓိကအနိုင်ရပေမယ့်တစ်ခုတည်းသောမဟုတ်ပါဘူး။
ရေးသားသူ: Spotify AB
Deezer - ဂီတနှင့် Podcasts များ
ရေးသားသူ: Deezer ဂီတ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖုန်းကိုများစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကောင်းမွန်စွာစီစဉ်ထားရှိခြင်းသည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ app တွေသတိထားမိဖို့ / သတိပေးဖို့လှည့်ခဲ့တယ် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းများကိုသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုစုစည်းနိုင်သည် စျေးဝယ်ဖို့ဘယ်လို။ ဒါဟာအလွန်အဆင်ပြေ option တစ်ခုဖြစ်သည်, နှင့်ဤလယ်ပြင်၌ application များ၏ရွေးချယ်ရေးအတော်လေးကျယ်ပြန့်သည်.
သင့်ဖုန်းတွင်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောပေါင်းစပ်မှုရှိသည့်မှတ်စုလျှောက်လွှာတစ်ခုကိုသင်ရှာနေလျှင်၊ အကောင်းဆုံးရွေးစရာကတော့ Google Keep ပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အလွန်အသုံးဝင်သော Tasker ကဲ့သို့သောအလုပ်အက်ပလီကေးရှင်းများလည်းရှိသည်။ မှတ်စုအက်ပလီကေးရှင်းများတွင် Evernote သည်အခြားအလွန်တန်ဖိုးရှိသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
Evernote - မှတ်စုများစီစဉ်သူ
စျေးနှုန်း: € 3,59
သင်ယခုသိပြီးသားအတိုင်း Play Store မှရှာတွေ့သော application များ၏ရွေးချယ်မှုသည်ကြီးမားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားပိုမိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အခြေအနေများတွင်အသုံးဝင်သောကိရိယာအချို့ရှိသော်လည်း ကျနော်တို့ကတခြားအချိန် applications များ၏ရည်ညွှန်းသည် ဘာသာပြန်များအဖြစ် o ဖိုင်စူးစမ်းရှာဖွေသူများ။ အမှုများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုမည့်အပလီကေးရှင်းများနှင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖုန်းတွင်သုံးရန်ထိုက်သည်။
ရေးသားသူ: BACHA ပျော့ပျောင်းသည်
သင်သည်သင်၏ Android ဖုန်းကို အသုံးပြု၍ စာရွက်စာတမ်းများကိုဖတ်ရန်၊ ၄ င်းတို့သည် Word သို့မဟုတ် PDF အမျိုးအစားများဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်ဖုန်းတွင်ဤဖိုင်အမျိုးအစားများကိုဖွင့်နိုင်မည့် application များသင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ငါတို့အရင်၊ Play Store တွင်လက်ရှိရရှိနိုင်သည့်ရုံးဆိုင်ရာအလိုအလျောက်လုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများ သင်နေရာချွေတာရန်ရှာနေသည်ဆိုသော်ငြားအရာအားလုံးကိုအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှဒေါင်းလုပ်လုပ်သောကြောင့် WPS Office ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ငါတို့အရာအားလုံးကိုလက်လှမ်းလိမ့်မယ်။ စာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ် PDF ဖိုင်များကို၎င်းနှင့်အတူ Excel နှင့်အတူဖွင့်နိုင်သည်။ အလွန်ပြည့်စုံပြီးအားလုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်သောတူညီသောအထုပ်တွင်စုစည်းထားသည်။
ဒါဟာအလွန်ကျယ်ပြန့်လယ်ပြင်သည်, \_ t ဒါပေမယ့်ငါတို့ Android ဖုန်းရဲ့လုံခြုံရေးကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာခြိမ်းခြောက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်လုံခြုံရေး application တချို့ရှိရင်အသုံးဝင်နိုင်တယ်။ ဒီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရလျှင်လုံခြုံရေးကိုတိုးမြှင့်ပေးသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုရည်ညွှန်းသည်။ ကျနော်တို့ပြီးသားယင်း၏နေ့ရက်ကာလ၌သင်တို့ကိုပြောသည်အဖြစ်။ ထိုစာရင်းရှိအက်ပလီကေးရှင်းများသည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးမှစကားဝှက်မန်နေဂျာများအထိရှိသည်။
စကားဝှက်မန်နေဂျာများအရာအကြောင်း သင်ဒီမှာပိုပြီးသိနိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်များ (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းသို့ဝင်ရောက်ရန်ကာကွယ်ရန်ယနေ့ခေတ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ကံကောင်းတာက, ရွေးချယ်မှုအတော်လေးကျယ်ပြန့်သည်နှင့် ကြီးစွာသောအရည်အသွေးရွေးချယ်စရာရှိပါတယ် အတူတူပါ။ ဒီနယ်ပယ်မှာအထင်ရှားဆုံး option ကတော့ Android စကြာ ၀ inာတွင်သုံးစွဲသူများကိုထောက်ပံ့ပေးသော LastPass ဖြစ်သည်။
မဟုတ်သလိုကျနော်တို့အကြောင်းကိုမေ့လျော့နိုင်ပါတယ် Find My Device ခေါ်ဂူဂဲလ်အက်ပ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ပျောက်ဆုံးသွားသောသို့မဟုတ်ခိုးယူထားသော Android ဖုန်းကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့အရင်ပြပြီးသောအရာ။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်နောက်ထပ်ကောင်းသော app ကို။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Android ဖုန်းအသစ်လား။ ဒါကြောင့်သင်ကဒီအက်ပလီကေးရှင်းတွေလိုတယ်